मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकले पूर्व गभर्नरसँग छलफल गर्दै, प्रवक्ता भन्छन्ः उपर्युक्त समयमा आउँछ – खबर नेटवर्कस्
खबर नेटवर्कस् > खबर नेटवर्कस् > मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकले पूर्व गभर्नरसँग छलफल गर्दै, प्रवक्ता भन्छन्ः उपर्युक्त समयमा आउँछ
मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकले पूर्व गभर्नरसँग छलफल गर्दै, प्रवक्ता भन्छन्ः उपर्युक्त समयमा आउँछ
पोष्ट गरिएको साउन. ०३, २०७८ मा २:३० मध्यान्ह साउन ३, २०७८
काठमाडाै । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीति निर्माणको क्रममै रहेकाले उपयुक्त समयमा ल्याउने बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता देव कुमार ढकालले मौद्रिक नीति ल्याउने सन्दर्भमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल भइरहेको भन्दै उपयुक्त समयमा ल्याइने बताएका हुन् । यसका लागि पूर्व गर्भनरहरुसँग छलफल भइरहेकाे पनि उनले बताए ।
‘आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति निर्माणको क्रममा विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुसँग सुझाव संकलन गर्ने कार्य हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ, एक दुईवटा सरोकारवाला खासगरी पूर्व गर्भनरज्यूहरु सँग सुझाव संकलन गर्ने काम बाँकी छ । र सो सुझाव संकलनको आधारमा हामी मौद्रीक नीतिको निर्माणको आन्तरिक तयारी पनि सँगसँगै गरिरहेको अवस्था छ,’ उनले भने ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ बजेट अध्यादेशबाट ल्याएको र हाल सरकार समेत परिवर्तन भएको सन्दर्भमा मौद्रिक नीति कहिले आउँछ भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।
शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति आउन ढिलाई हुने बताएका थिए । उनले शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मलेनको आयोजना गर्दै मौद्रिक नीति ल्याउन ढिलाई हुने बताएका थिए ।
मन्त्रालयका विभिन्न विभाग र राष्ट्र बैंकसँग यसका लागि समन्वय र छलफल भइरहेकाे बताउँदै उनले माैद्रिक नीति आउन समय लाग्ने प्रष्ट पारेका थिए ।
सरकार फेरिएपछि मौद्रिक नीति कहिले आउँछ भन्ने अहिले सबैको चासोको विषय बनेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट अनुसारको मौद्रिक
बिकास न्युज साउन ३, २०७८
नबिल बैंकले साउन १० गतेदेखि ऋणपत्र जारी गर्ने, व्याजदर कति ?
कामना सेवाको प्रगतिः खुद नाफा ४८४ प्रतिशतले बढ्दा निष्क्रिय कर्जा घट्यो